मान्छेको सौख पनि कस्ता-कस्ता हुन्छन् ! | newsnepali.com
मान्छेको सौख पनि कस्ता-कस्ता हुन्छन् !
Published on: Sun, Jan 19th, 2014 By
उफ ! मान्छेका सौखपनि कस्ता कस्ता हुन्छन,पत्याउनै गार्हो पर्ने । कसैको कुनैमा सौख हून्छ त कसैको कुनैमा । यस्तै एउटा सौखका कारण अमेरिकी एउटा महिलाको कपाल लामो पाल्ने सौख चलेछ र कपाल पाल्न लागिछिन् उनको कपाल अहिले ५५ फिट लामो छ । लामो मात्र हैन, उनको कपालको तौल पनि झण्डै १९ किलो छ । जर्जियाको एटलाण्टाकी बासिन्दा आशा मण्डेलाको यत्रो भिमकाय कपाल देखेर डाक्टरहरु पनि डराए । उनलाई डाक्टरहरुले कपाल काट्न सुझाव दिए । कपाल नफ्याँकेमा प्यारालाइसिस हुने चेतावनी दिए । तर आशाले बरु ज्यान फ्याल्न तयार भइन् कपाल गुमाउन चाहिनन् ।
एक सन्तानकी आमा आशा भन्छिन्, ‘मेरो कपाल मेरो जिवनको भाग भैसक्यो । यो मेरो जिवन हो, मैले कहिल्यैपनि कपाल काट्दिन ।’ कपाल काट्नु आत्महत्या गर्नु सरह रहेको उनी बताउँछिन् ।
विश्वमा सबैभन्दा लामो कपाल भएको मानिसको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी ४७ वर्षकी आशा आफ्नो कपाल आफ्ना लागि सन्तानजत्तिकै प्यारो रहेको बताउँछिन् । कपालकै कारण आफुलाई क्यान्सर, हृदयाघात जस्ता रोगले समेत केही गर्न नसकेको दाबी उनको छ ।
उनका ११ वर्षे छोराले आमाको कपाल जतन गर्न सहयोग गर्छ । आफ्नो आखा अगाडि त उनले ज्यान गएपनि कपाल काट्न दिँदिनन् । तर भुइँमा लत्रिएको बेला कसैले आँखा छलेर कपाल काटिदिने हो की भन्ने चिन्ता छ उनमा । उनले आत्मिक कारणका लागि भन्दै २५ वर्ष अघिदेखि कपाल पाल्न थालेकी थिइन् ।